बन्द गरौं राजनीतिक खेल | गृहपृष्ठ
Home पाठक विचार बन्द गरौं राजनीतिक खेल
on: १९ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार १२:४५ पाठक विचार
लामो समयपछि भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले खुलेरै आफू र आफ्नो सरकारको प्रशंसा गरे । २० वर्षको अन्तरालमा कम्तीमा पनि चारओटा निर्वाचन हुनुपर्ने थियो । तर, हुन सकेन । त्यसको कारणबारे अहिलेका अधिकांश नेपालीले थाहा पाइसकेका छन् । १० वर्षे आन्दोलन गरेर मुलुकमा आमूल परिवर्तन भयो भन्ने नेता धेरै नै छन् र त्यसमध्ये मुख्य उनी नै हुन् । तर, केकस्तो परितर्वन भयो भनेर स्पष्ट उत्तर पाउन सकिएको थिएन । बल्ल थाहा भयो, २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यो पनि सत्तामा आपसी तालमेल वा बाँडीचुँडी । यही हो त नेपालको राजनीतिक परिवर्तन ?
राजनीति सत्ताका लागि गरिन्छ । त्यसमा विवाद छैन । तर, सत्ताकै लागि जनता मार्नु र उनीहरूको मौलिक हक खोस्नु कदापि उचित होइन । कहिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन त कहिले लोकतान्त्रिक आन्दोलन । सधैं आन्दोलन नै आन्दोलन गरेर जनताले विकासमा लाग्ने कहिले ? लोकतन्त्र आयो भनेर खुशी भएको छोटो समयमा नै तराईमा आन्दोलन भयो । अहिले निर्वाचनका लागि मुलुक तयार भइरहँदा तराई आबद्ध केही राजनीतिक दलहरू आफ्ना माग लिएर सरकारसँग मोलमोलाई गर्दै छन् । यस्ता माग राख्दै जाने हो भने मुलुकले कहिले पनि शान्तिको वातावरण पाउन सक्दैन । जनतालाई विभिन्न लोभ देखाएर सधैं आन्दोलनमा होम्ने हो भने उनीहरूको आर्थिक उन्नति कहिले हुने ?
नेपाली जनता अहिले पनि त्यस्तै हल्लाको पछि लागेका छन् । हरेक राजनीतिक दलका आआफ्ना नारा छन्, जनतालाई उचाल्ने, उराल्ने र बराल्ने । हल्लाकै भरमा निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने, आफ्नो पक्षमा मत आउने अवस्था नभएमा निर्वाचन हुनै नदिनेसम्मको क्रियाकलाप नेपालका राजनीतिक दलले देखाएकै छन् । अनि तिनै जनताले तिरेको राजस्वमा मोजमस्ती गरेर जनतामाथि शासन गर्न खोजिरहेका छन् ।
अहिले मुलुकमा सामाजिक संस्कार, रहनसहन र बोली व्यवहारमा केही परिवर्तन भएको छ । तर, राजनीति गर्ने शैलीमा कुनै अन्तर आएको देखिँदैन । जनतालाई ओझेलमा पारेर सत्ताका लागि गरिने खिचातानी विगतमा जस्तो थियो अहिले पनि उस्तै देखिन्छ । यही प्रवृत्ति राजनीतिक दलमा रहने हो भने लोकतन्त्र आउनु र नआउनुमा कुनै अन्तर छैन । केवल प्रजातन्त्र मात्र भए पुगिहाल्थ्यो । किन भन्नुप¥यो लोकतन्त्र दिवस वा गणतन्त्र दिवस ?
पहिलो चरणको निर्वाचन सकिए पनि अन्तिम परिणाम अझै आउन सकेको छैन । त्यहाँ पनि हल्लाकै करामत देखिन्छ । जुनसुकै दलको प्रतिनिधिले जिते पनि जनताका लागि कुनै फरक पर्ने छैन । तर, आफूआफूमै हल्ला फिँजाएर एकआपसमा उछित्तो काढ्दा कुनै पनि दललाई फाइदा छैन । जनताले राजनीतिभित्रको फोहोरी खेल बुझ्ने मौका मात्र पाउने हुन् । राजनीतिक दलले बुझ्नुपर्ने कुरा नै यही हो । जनतालाई ओझेलमा पारेर स्वार्थका लागि राजनीतिक दलका बीच हुने फोहोरी तालमेल कदापि स्वीकार्य हुँदैन । सधैं यस्तै हल्लाको राजनीति चलाउन खोज्ने हो भने अहिलेका सबै राजनीतिक दलको अस्तित्व क्रमशः बिलाउँदै जान्छ । नेताहरूले बेलैमा बुझेकै राम्रो ।